Obere kọmputa, atụnyere ụdị kacha mma nke 2022
Ee, weebụ bụ maka laptọọpụ, mana a Obere kọmputa dịkwa obere, mba? 🙂 Ọmụma anaghị eme na n'oge na-adịbeghị anya, anwalela m ụfọdụ n'ime ihe ịchọ mma ndị a m hụrụ n'anya, ya mere ka anyị banye na ya.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ozugbo onyinye dị na Obere kọmputa, anyị nwere ike ikwu na ị lee anya na ibe weebụ a.
Ka anyị kwuo ihe n'ụzọ doro anya: kọmputa desktọpụ enwekwaghị ọnọdụ ha n'elu; A naghị eme ha ka ha pụta ìhè. Ha bụ igbe buru ibu, na-eme mkpọtụ, na-akpa ike nke ukwuu, nke eriri gbara ya gburugburu. Ha aghọọla otu n’ime kọmputa ndị anyị na-agaghị achọ inwe ihe ọ bụla anyị ga-eji mee ma ọ bụrụ na anyị agaghị elekọta otu (ezinụlọ anyị ka na-eji kọmputa ochie eme ihe, ọ bụ ihe e kenyere anyị n’ọrụ, wdg). . Mana laptọọpụ abụghị mgbe niile ka anyị na-achọ.
Mgbe ụfọdụ, anyị na-achọ ịrụ ọrụ na ihe nleba anya nke buru ibu karịa laptọọpụ, mana anyị nwere oke ohere. Iji telivishọn dị ka ihe nleba anya, kama iweta ihe nleba anya n'ime ụlọ, ga-abụ nhọrọ kacha mma.
1 Ntụnyere obere kọmputa
2 Uru kacha mma maka obere kọmputa
2.1 Rikomagic MK22: Ebe mbụ
2.2 asus chrome igbe 4
3 Obere PC dị ọnụ ala
4 Kedu ihe kpatara ịzụta obere kọmputa?
5 Mmechi na ndụmọdụ
Ntụnyere obere kọmputa
Ọ bụrụ na ị na-achọ obere kọmputa, ebe a bụ ntụnyere ga-enyere gị aka ịhọrọ nke ọma karị:
Obere PC Windows 10 Pro ...
Obere PC Desktop Computer...
2020 Apple Mac Mini na ...
Uru kacha mma maka obere kọmputa
Agbalịrị m ọtụtụ ụdị na a hapụrụ m ihe ngosi anọ tụrụ m n'anya na m depụtara n'okpuru ebe a, na mgbakwunye na, dị ka mgbe niile, na-ejikọta na onyinye kacha mma m chọtara gị na ịntanetị. Anyị haziri ha site na kacha mma ruo na "kachasị njọ" n'usoro nke àgwà-ọnụahịa.
Rikomagic MK22: Ebe mbụ
Ike nke ihe bụ obere kọmputa TV Igbe. Ya bụ, ị nwere ike jikọọ ya na TV ileba anya na-atụgharị ha a PC na gam akporo sistemụ. Ọ nwere ike ịme ụdị ngwa niile. Ọ na-atụgharị na ihe nke sekọnd na ị nwere ike na-ekiri videos na a ìgwè nke formats.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na zuru nyochaa n'okpuru enye, ọ bụ n'ezie na Obere kọmputa isi N'ime ndị niile anyị nwara, na ebe a anyị depụtara naanị anọ. Ọ bụkwa nke nwere ọkwa kacha mma sitere na ndị ọrụ niile.
Njirimara nke ị ga-etinye
Nhazi: CORTEX-A15 de 8 cores
Total ebe nchekwa: 16GB
Kaadị esereseIhe: PowerVR
Sistemụ ọrụ: Gam akporo
asus chrome igbe 4
Asus Chromebox abụghị obere kọmputa maka ndị chọrọ ezigbo batrị kwa ụbọchị, ụbọchị niile, ma ọ bụ ọbụna maka ndị chọrọ ọkpụkpọ mgbasa ozi. Otú ọ dị, ọ bụ, zuru oke maka ndị nwere obere mkpa ma ọ bụ ọbụna nwatakịrị chọrọ naanị kọmputa maka ime ụlọ ya, nke nwere oke na ojiji ya (dịka ọmụmaatụ naanị maka ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ iji sọfụ na netwọk). Enweghị ihe mgbakwunye na-adọrọ mmasị karịsịa na ha ga-eme ka obi gị dị ngwa, ma arụnyere Chrome OS dị fechaa yana arụmọrụ ya na-atọ ụtọ n'ezie.
ASUS Chromebox 4…
Iji akwụkwọ na-arụ ọrụ, iji ihe onyonyo na-echekwa ohere na-ebu ibe weebụ, na ikiri vidiyo ịntanetị na-adị ngwa ma dị mfe, yana ị gaghị enwe nsogbu n'ịrụ ọrụ niile dị mkpa nke ị na-emekarị na kọmputa ka ukwuu. Na-abịa na ahụigodo na òké, ma ị ga-achọ ihe nleba anya iji Chromebox; Dị ka m tụrụ aro na mmalite, ị nwere ike iji telivishọn gị dị ka ihuenyo. Maka ihe ọ na-efu, ọ bụ ezigbo ịzụrụ.
NhaziIhe: Intel Celeron
Ọdụ ụgbọ mmiri USB: 2 x USB3 (n'ihu), 2x USB3 (n'azụ)
Total ebe nchekwaNchekwa: 32GB SSD
Kaadị eserese: Ihe osise Intel UHD
Ihuenyo: Ọ dịghị
Sistemụ ọrụIhe: Chrome OS
PC gụgharia ka mma ma ọ bụrụ na ha dị More obere, eji aghụghọ chọọ ya mma y gbachi nkịtị, na Zotac nwere àgwà ndị ahụ niile. N'ezie, ọ bụ kpamkpam juu, na a usoro jụrụ oyi nke ahụ ga-ekwe omume ekele TDP dị ala nke ukwuu site na ihe nrụpụta Celeron gị. N'ezie, ike dị ala na-ebute arụmọrụ dị jụụ nke ọma, ma ọ bụrụhaala na mkpa gị dị ntakịrị, ị gaghị enwe nsogbu na kọmputa a.
Uru ọzọ nke kọmpụta a bụ na ọ bụ ya mfe upgradeable: enwere a 2.5-inch SSD mbanye nke enwere ike wepu ya ngwa ngwanakwa ị nwere ike imegharị ya n'usoro nke RAM. Maka ihe ọ na-efu, ọ dabara maka onye ọ bụla chọrọ itinye akụrụngwa na ntinye ihe nkiri ụlọ ha mana ọ chọghị imefu oke.
Akụkụ nke Zotac Zbox Nano Ci321 (Plus)
Oghere PCI-E x16: 0
Ọdụ ụgbọ mmiri USB: 4xUSB3, 1xUSB
Mpụta vidiyoIhe: HDMI, DisplayPort
Oghere draịva ike: 1 nke kacha nke 2.5 inch
Acer Revo Cube Pro nwere otu n'ime obere usoro ndị a kacha eche nke ọma nke anyị enyochabeghị. Obere ihe owuwu ya nwere ohere zuru ezu maka draịva ike atọ, nke pụtara na ị nwere ike iji ya karịsịa ma ọ bụ naanị dị ka PC raara onwe ya nye faịlụ mgbasa ozi maka ọnụ ụlọ gị ma ọ bụ ọbụna wụnye ya dị ka onye na-ere ahịa nkesa faịlụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Ọ bụghị obere kọmputa kacha ọsọ nke uwa ma ya Teknụzụ Intel nwere Intel Core i5 dual-core processor na ya njikwa eserese nwa ike ịkpọ HD vidiyo zuru oke, nke karịrị ihe ị na-ahụkarị na ụdị ngwaọrụ a. Ọzọkwa, dabere na ihe nlereanya ị zụrụ, ọ nwere ike tinyekwara ebe dịpụrụ adịpụ dị nnọọ irè, zuru okè maka ndị na-achọ ihe na-agbanwe karịa keyboard na òké.
Atụmatụ nke Acer Revo One RL85
Nhazi: Quad-core 2,2GHz Intel Core i5-5200u
USB ọdụ ụgbọ mmiri: 2 x USB, 2 x USB3 (n'azụ)
Total ebe nchekwa: 1TB diski ike
Kaadị esereseIhe: Intel HD
Sistemụ ọrụNgwa: Windows 10
Obere PC dị ọnụ ala
Ọ dị mma, ikekwe ị na-achọ ngwaọrụ desktọpụ dị ọnụ ala. N'elu anyị gosiri na kacha mma n'ihe gbasara àgwà na ọnụahịaAgbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ katalọgụ zuru oke, anyị na-akwado gị lee anya na ibe weebụ a.
Kedu ihe kpatara ịzụta obere kọmputa?
Obere kọmputa nwere ike ịbụ ezigbo ngwọta n'ọtụtụ ọnọdụ. N'ịbụ ndị dabeere na obere akụkụ - nke, ya mere, ha na-eji obere batrị -, na-ewere obere oghere nke kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ ọdịnala, na ọ dịghị achọ akụkụ ndị na-adịghị mkpa dị ka ihuenyo, batrị ma ọ bụ ahụigodo.
Ọtụtụ dị obere nke na ị nwere ike ịkwanye ha n'azụ ihe nleba anya wee mepụta PC nke gị niile n'ime otu. Nke a nwere uru nke ahụ ị nwere ike imelite ihuenyo gị na-enweghị ngwa ngwa, na-enweghị iji dochie usoro dum, dị ka ọ na-eme na laptọọpụ na ọtụtụ kọmputa.
Mgbapu batrị dị ala pụtakwara na obere PC chọrọ obere teknụzụ ma a bịa n'ịjụ oyi na nke ahụ ọ ga-arụ ọrụ n'ụzọ dị jụụ karịyabụ ị nwere ike iji ya dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-enweghị ndọpụ uche nke ndị fan.
Enwekwara mbelata, n'ezie. Obere kọmputa enwechaghị oghere ime maka kaadị eserese dị ike ma ọ bụ 3.5-inch desktọọpụ siri ike (ọ bụ ezie na ụfọdụ na-akwado). Ị ga-adabere na eserese agbakwunyere na, n'ọtụtụ ọnọdụ, draịvụ ike nke inch 2.5 (ọ kacha mma ịhọrọ SSD n'ọnọdụ ndị a, yabụ obere kọmputa gị ga-aga ngwa ngwa)
Nọmalị Mgbasawanye na mmelite ndị ọzọ niile ga-adị mfe itinye n'èzí. Dịka ọmụmaatụ, n'ihe gbasara obere kọmputa, dị ka Zotac Nano XS, ohere dị oke nke na ị ga-enwe ike iji mSATA SSD nke etinyere na ya.
Buru nke a n'uche, ị ga-achọ ịṅa ntị na nhọrọ njikọta nke obere PC gị na-akwado, ọkachasị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ikwunye usoro nchekwa mpụga, chọọ ọdụ ụgbọ mmiri USB 3.0. Chillblast's Fusion NUC na-enye gị njikọ Thunderbolt kama, mana draịva siri ike dakọtara na-esi ike ịchọta yana ndị dị mfe amụbeghị. thunderbolt nkwụnye na USB 3.0.
E wezụga ịbụ obere na dabara na nkwụ aka gị, ha nwekwara ọtụtụ njikọ.
Iji jikọọ PC na ihe nleba anya LCD ọkọlọtọ ị nwere ike iji HDMI, ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịmepụta kọmpụta ụlọ niile, ị ga-achọ DisplayPort, Thunderbolt, HDMI 1.3 (ma ọ bụ karịa) ma ọ bụ njikọ DVI abụọ. iji jikọọ ihe ngosi nke nwere mkpebi dị elu nke 1920 x 1200 pikselụ. Ọ bụrụ na ị na-eke obere oghere maka faịlụ mgbasa ozi, ị nwere ike iji njikọ HDMI maka ọdịyo, mana Ọ bụrụ na ị nwere stereo dị n'èzí nwere ntinye dijitalụ ị nwekwara ike ịchọ njikọ S / PDIF na obere kọmputa gị..
Ịlaghachi n'echiche nke ịmepụta usoro ụlọ nke gị, A na-erekarị obere kọmputa na-enweghị keyboard ma ọ bụ òké, na ọtụtụ oge ha na-abịa na-enweghị usoro onye ọrụ. Nke a na-ahapụ gị ka ị nwee ike ịme mkpebi nke gị maka nhọrọ kacha mma maka gị. Ee n'ezie, buru ihe a n'uche mgbe ị na-agbakọ mmefu site na PC ọhụrụ gị.
Arụmọrụ nke obere PC nwere ike ịdị mma nke ukwuu, ọkachasị mgbe ị na-eji SSD dị ka diski buut. Ọtụtụ ụdị nhazi dị, site na obere Intel na Celeron ibe ruo Core i7 nwere Hyperthreading ọgbara ọhụrụ. Ndị nhazi AMD nọkwa n'aka gị, yana ụdị nke ahụ ha na-eji obere batrị ya mere nyere aka mee ka kọmputa ọhụrụ gị dị jụụ na jụụ.
Ihe ọ bụla ị na-ahọrọ nke CPU, akụrụngwa a ga-enye aka nweta eserese kacha mma (na nke a bụ ebe ị ga-ahụ njedebe na arụmọrụ ya). Ọ nweghị otu n'ime obere kọmputa ndị a nyochara ebe a nwere kaadị eserese dị iche iche. Ndị nrụpụta Intel kachasị ọsọ na-abịa na HD Graphics 4000 agbakwunyere, nke dị mma maka egwuregwu Windows ndị ọzọ dị ntakịrị, mana ụdị dị ọnụ ala na-enye gị ọbụna obere ikike eserese.
AMD processors agbasaghị inye ngwa ngwa ndịna-emeputa. Ezi ihe atụ bụ A8-4555M mgbawa, dị ka nke ahụ na Sapphire's Edge VS8. N'ebe ọwụwa anyanwụ agbakwunyere eserese Radeon 7600G na ọ bụ ike nke ukwuu elu arụmọrụ mgbe ọ na-abịa egwuregwu, ọ bụ ezie na o doro anya na ọ dara mkpụmkpụ ma e jiri ya tụnyere PC e mere maka egwuregwu vidiyo nke ọma.
Obere kọmputa ọ bụla a tụlere n'isiokwu a dị ntakịrị, mana enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ha. Ihe kacha pụta ìhè bụ ọnụahịa, ma na nkwubi okwu a, anyị ga-achọkwa ikwu maka ụdị ndị ọzọ anyị nwalere ma na-enweghị ebe a na-atụnyere kọmputa, n'ụzọ bụ isi maka ọnụahịa dị oke elu na-atụle na ebe nrụọrụ weebụ anyị bụ. nke ọnụ ala laptọọpụ. Nhọrọ dị oke ọnụ dị ka Mac mini ma ọ bụ Chillblast Fusion NUC na-enye gị arụmọrụ kacha mma. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike na-akwụ ụgwọ maka ịdị mma na nrụpụta na ike. Rikomagic MK80 bụ nke anyị tụlere nke kachasị mma na ọnụahịa dị mma n'agbanyeghị na nhọrọ ndị ọzọ adịghị anya n'azụ.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị ọrụ agaghị achọ ịrụ ọrụ dị elu ma ọ bụ ihe nrụpụta enweghị ntụpọ. Maka iji kọmpụta nkịtị, ụdị ndị dị ọnụ ala - sitere na MSI, Sapphire ma ọ bụ Zotac - ga-enye gị arụmọrụ zuru oke maka ọrụ ndị dị ka igwu egwu multimedia, sọfụ na webụ ma ọ bụ obere ọrụ ọfịs.. Tụlee nhọrọ nchekwa na ịgbasawanye, ya mere.
Zotac Nano XS ga-adabere kpamkpam na nchekwa mpụga, mana ọ bụrụ na nha dị mkpa, ọ siri ike imeri.Ọ dị obere karịa nke ọ bụla ọzọ na ntụnyere anyị, na-enweghị ịchụ àjà dị ukwuu n'ihe gbasara ịrụpụta mma ma ọ bụ njikọta.
Nke ọ bụla n'ime obere kọmputa ndị a nwere ụfọdụ ntụpọ ndị ọzọ, site na ọnụ ahịa dị oke elu ruo na arụmọrụ dị ntakịrị ma ọ bụ obere njikọ. A ga-ekpebi nke kacha mma dabere na mkpa gị na nkeonwe.
Iji ghọta nke ọma echiche obere PC, anyị akwadola Zotac Nano XS AD13 Plus. Ọ bụrụ na imewe, arụmọrụ dị elu, na OS bulletproof dị gị mkpa, mgbe ahụ Mac mini bụkwa nhọrọ dị oke mma, dị na ọnụ ala dị ala mgbe na nhazi dị ala karịa nke anyị tụlere ebe a; Maka sistemu zuru oke yana arụmọrụ egwuregwu dị mma, Sapphire's Edge VS8 bụ nhọrọ ezi uche dị na ya na ọnụahịa dị mma.. O kwesịrị izute mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ, ma ọ bụrụ na ị nwere ihe na-achọsi ike ịrụ ọrụ chọrọ, ị ga-achọ ihe dị ike karị.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Tipo » Obere kọmputa